PuntlandTimes- | Author Archives	Wednesday, February 22nd, 2017	Home
News By Mohamed Yusuf Yasin
AKHRISO: Al- Shabaab oo markii ugu horeysay ka hadashay Doorashadii M/weyne Farmaajo
MUQDISHO(P-TIMES)- Al- Shabaab oo ah Urur u diwaangashan Argagixiso kana dagaalamaya gudaha Soomaaliya ayaa mudo ka aamusnaa doorashada Madaxweynaha dawladda faderaalka Max’ed Cabdullaahi Farmaajo oo ay soo dhaweeyeen Shacabka Soomaaliyeed.
Sheekh ...	DAAWASHO XASAASI AH: Muxuu ahaa Ujeedka howlgal ciidan oo laga fuliyey Xeebaha G Mudug & Saldhig ciidan oo la dhisay
GAALKACYO(P-TIMES)- Ciidamo wadajir ah oo ka socda Galmudug, Dawladda faderaalka iyo dawladdaha taageera howlgalada La dagaalanka Argagixisada ayaa tagay deegaano dhaca xeebaha gobalka Mudug, goobahaas oo ay ka sameysteen saldhig ...	AKHRISO: Madaxweynaha Uganda oo fariin xasaasi ah u diray dhigiisa Soomaaliya, Maxaase ku qornaa?
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha Uganda Yuweri Musaveni ayaa dhambaal xasaasi ah u soo diray dhigiisa Soomaaliya Max’ed Cabdullaahi Farmaajo, taas oo ka hadlaysa arrimaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Uganda ayaa warqaddiisa si toos ah ugu ...	XOG XASAASI AH: Wadamo Carbeed oo ku dhawaaqay in ay dhisayaan ciidamada Soomaaliya, Waase kuwee?
MUQDISHO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa ogaaday in goor horeba ay soo gaareen Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Dhambaalo ay dawladdaha carbeed qaarkood ku balanqaadeen Malaayiin Dollar oo qeyb ...	DEG DEG+AKHRISO: Ma dhab-baa in ay IGAD ka qaaday xilkii Jen, Gabre oo wakiil uga ahaa arrimaha Soomaaliya?
MUQDISHO(P-TIMES) – Warar laga helayo magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in ay Urur gobaleedka IGAD xilka qaadis ku sameeyeen Jen, Gabre oo kamid ahaa wakiiladooda arrimaha siyaasadda ee ...	FARRIIN XASAASI AH: Ergayga Midowga Africa & AMISOM ee Soomaaliya oo fariin xasaasi u diray Shacabka & Dawladda cusub ee Soomaaliya.
Soomaliya waxay yeelatay Madaxweyne cusub oo si dimoqraadi ah ay u doorteen xubnaha labada aqal doorasho xor iyo xalaal ah oo ay joogeen goobjoogayaal caalami ah.
Waan u hambalyeynayaa Madaxweyne Maxamed ...	DAAWO SAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Safiir cusub ee UK u joogi doona Soomaaliya, Maxayse ka wada hadleen?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda Ingariiska u soo magcaabdey Soomaaliya.
waa safiirkii ugu horreeyey ee uu madaxweynaha J.F. S mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ...	XOG MUHIIM AH: Dilal qorsheysan oo ka dhacay magaalada Muqdisho & NISSA oo ka hadashay dad lasoo qabtay
MUQDISHO(P-TIMES)- Labo dil oo qorsheysan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya, kuwaas oo ay geysteen dabley hubeysan, oo watay qaar kamid ah baabuurta raaxada, waxaana dilalkan ay ka ...	AKHRISO: Talo ku socota Madaxweynaha Umada Soomaaliyeed, Mudane Mohamed Abdullahi Farmaajo.
Talo ku socota Madaxweynaha Umada soomaaliyeed Mudane Mohamed Abdullahi Farmaajo
Marka hore waad salaamantihiin dhamaantiin iyo madaxweynaheena.
Runtii sidii loo doortay Madaxweyne Mohamed Abdullahi Farmaajo, waxay niyadeyda jeclaystay in aan ku biiriyo ...	WAR DEG DEG AH: Diyaarado dagaal oo goor dhaw ka dagay Madaarka magaalada Berbera & Amniga oo la adkeeyey
BERBERA(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Berbera ee Somaliland ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha ee magaaladaas ay goor dhaw ka dagtay diyaarad dagaal oo laga leeyahay dalka Kuweit, taas oo ...	« Previous Page — Next Page »	Click here to add Widgets	FARSAMADII KALAFOGE